नेपाल आज | मलाई पैसाले पुगेको छैन, यसकारण काम गर्दैछु (भिडियोसहित)
कर्पोरेट भिडियो कभर स्टोरी कुरा: पैसाको
मलाई पैसाले पुगेको छैन, यसकारण काम गर्दैछु (भिडियोसहित)
बिहिबार, १५ भदौ २०७४ गते प्रकाशित - नेपाल आज (DR)
काठमाडौं । विकासका लागि महत्वपूर्ण शर्त पूँजी हो । नेपालको सुदूरपश्चिममा किन विकास भएन ? ‘किनभने त्यहाँका मानिस अल्छे छन्, त्यहाँका मानिसमा पौरख गर्ने दक्षता छैन’ – यस्तो कदापी होइन । सुदूरपश्चिममा किन विकास पुगेन भने त्यहाँ पूँजी पनि पुगेन । यसकारण सुदूरपश्चि अविकसित नै रह्यो ।
मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाह भन्छन्, ‘यदि मसँग नोट छाप्ने मेसिन भइदिएको भए र मैले छापेको नोटले सबैतिर मान्यता पाउने भएको भए धेरै पैसा छापेर सुदूरपश्चिम पठाउँथे । जहाँ जहाँ पुँजी छैन त्यहाँ त्यहाँ पठाउँथे । म र मेरो परिवारले मात्रै खर्च गर्न पाउने भए चाहिँ आवश्यक मात्रै छाप्थे होला ।’
पैसा जीवनको महत्वपूर्ण साधन भएकोले यस्तो वस्तु कमाउन मेहनत गर्नुपर्ने धारणा राख्ने शाह नेपालमा एक नम्बरी काम गरेरै पनि पैसा कमाउन सकिने दावी प्रस्तुत गर्छन् । नेपालको वित्तीय क्षेत्र सबैभन्दा पारदर्शी छ । वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीको राम्रो तलब छ । र, अनुशासित क्षेत्र पनि हो यो । यसकारण नेपालमा एक नम्बरी काम गरेर पैसा कमाउन सम्भव छ – उनको तर्क छ ।
नेपालमा निजी बैंकहरु स्थापना हुनुअघि सिमित वर्गसँग मात्रै बैंकिङ पहुँच थियो । शाह भन्छन्, ‘नेपाल अरब बैंक खुल्नु अघि सरकारी बैंकले कम जनतालाई मात्रै समेटन सकेको थियो । अहिले निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि धेरै वर्गका मानिससम्म बैंक पुगेको छ । यो सफलता नै हो ।’
नेपालको आर्थिक विकास गर्न के गर्ने ? शाह भन्छन्, ‘धनी मानिसहरुलाई गरिब बनाएर आर्थिक विकास हुँदैन । केही मानिसलाई धनी बनाएर पनि भएको छैन । सबैलाई धनी बनाउने उपाय खोज्नु पर्छ । त्यो गाह्रो काम हो । यो काम कुनै एक क्षेत्रले मात्रै गर्न सक्दैन । सरकार, योजना आयोग, सरकारका अन्य अंगहरु, निजी क्षेत्र सबैको साथ चाहिन्छ ।’
धनी हुने सूत्र भनेको लगानी नै हो । अधिकांश मानिसहरु विदेशमा काम गर्न जानका लागि लगानी गर्छन । तर स्वदेशमै थोरै लगानी गरेर आफ्नै व्यापार व्यवसाय गर्न इच्छुक छैनन् । पौरखी व्यवहार अपनाउने, आफै लगानी गरेर स्वदेशमै रोजगार हुने विधि अपनाउन सकियो भने आर्थिक समृद्धि सम्भव छ ।सिइओ शाहसँग भएको केही रमाइला प्रश्नोत्तर यस्ता छन्ः
पैसासँग सोझै सम्बन्ध राख्ने पेशा/व्यवसायमा हुनुहुन्छ, तपाईको विचारमा पैसा के हो ?
– पैसा साधन हो । यो साधनबाट धेरै काम गर्न सकिन्छ । यो आर्जन गर्नु पर्छ ।
पैसा भन्दा पनि भावनालाई महत्व दिएर सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्ने आदर्शवादीहरु प्रति कस्तो भावना आउँछ ?
– पैसा कमाउनु अपराध होइन । पैसाकै पछि लाग्न चाहि मलाई पनि मन लाग्दैन । पैसा चाहिन्छ तर जीवनमा पैसा मात्रै भए पुग्छ भनेर हिँडन सक्दिनँ । तर एक कुरा के सत्य हो भने पैसाले मानिसलाई कहिले पुग्दैन । मलाई पनि पुगेको छैन । यसकारण काम गरिरहेको छु ।
इमान्दारपूर्वक काम गरेर धेरै पैसा कमाउन सम्भव छ ?
–इमानदार भएर पनि पैसा कमाउन सकिन्छ । नेपालको वित्तीय क्षेत्र नै हेर्नुस्, राम्रै छ सबै । अनुशासनमा बसेर पनि पैसा कमाएको देख्न सकिन्छ ।
पैसा खर्च गर्न अति नै कञ्जुस्याई गर्ने कसैको फेला पर्नु भएको छ ?
– किन फेला नपर्नु । अझ कलेजका दिनमा त केही साथी यस्ता पनि हुन्थे जो सधै पाँच सय वा हजारको नोट लिएर आउने । चेन्ज छैन भनेर उम्किने गर्थे । अर्को किशिमका साथी चाहि बिल सधै आफै तिर्न खोज्थे । आफूले पैसा तिरेन भने साथी नै नरहने हुन् कि भन्ने लाग्दो रहेछ ।
महिला र पुरुषमा को बढी कञ्जुस हुन्छन् होला ?
– महिलाहरु पैसा खर्च गर्नमा सचेत छन् । म उनीहरुलाई कञ्जुस भन्न चाहन्न । केटाहरु पैसा उडाउन खोज्छन् ।
कम मेहनत गरेर आएको पैसा खर्च गर्न तपाईलाई कति कम्फर्टेबल हुन्छ ?
– यसमा मेरो अनुभव भन्दा पनि कम मेहनत गरेर आएको पैसा सजिलै खर्च हुने रहेछ भन्ने अरुको हेरेर बुझेको छु । त्यस्ता मानिसहरुले महंगा गाडी चढ्ने, आवश्यकताका तर संसारका उत्कृष्ट वस्तु उपयोग गर्ने गरेको देखेको छु ।
तपाईको पर्समा सामान्यतः कति पैसा हुन्छ ?
– कार्डहरु हुन्छ । नगद त खास बोक्दीनँ । तर पनि चाहिहाल्छ । सबैतिर कार्ड चल्दैन । त्यही भएर १–२ हजार बोकेकै हुन्छु ।
तपाई मन्दिर जाँदा भिकारीलाई कति दान दिनु हुन्छ ? होटलमा टिप्स कति दिनु हुन्छ ?
–टिप्न दिन्न भने पनि १० प्रतिशत सर्भिस चार्ज होटलले लिइहाल्छ । गरी खान सक्ने भिकारीलाई पैसा चाहिँ दिन्न ।
नेपालको नोटमा राजाको फोटो त राख्न छाडियो । अब कसैको फोटो राख्नु पर्यो भने कस्को राख्दा ठीक होला ?
–नेपालमा गौतम बुद्ध बाहेक अरुको औकत त देख्दिनँ । अब यो संघीयताले त सगरमाथा, मन्दिर, नदीको पनि फोटो पनि राख्न नमिल्ने भैसक्यो । सगरमाथा त एउटा प्रदेशको हिमाल हो । अर्को प्रदेशले त्यो प्रदेशकै डाँडो किन भन्यो भने के गर्ने ? मेरो प्रदेशको नदी तेरो प्रदेशको पानी भन्न थाल्यो भने के गर्ने ? यसकारण मेरो बिचारमा सबैतिर पाइने पानी, झार राख्दा ठिक होला ।
एक काल्पनिक प्रश्न, तपाई आफैसँग पैसा छाप्ने मेसिन भइदिएको भए दिनमा कति छाप्नु हुन्थ्यो होला ?
–जहाँ पुँजी पुगेको छैन त्यहाँ पुँजी लैजान आवश्यक पर्ने जति छाप्थे । यदि म र मेरो परिवारका लागि मात्रै खर्च गर्न पाउने गरी छाप्ने अनुमति पाएँ भने त्यति नै छाप्थे जति मेरो परिवारका लागि आवश्यक हुन्छ ।
Anil Shah Money talk कुरा: पैसाको अनिल केशरी शाह